Daawo Muuqaalka Ninkii Waday Gaarigii 2-aad ee Shalay Qarxay, iyo Xog ku saabsan Ninkaas. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Oct 15, 2017
Shalay Qarixii waynaa ee Zoppe, kadib waxay Ciidamadda Ammaanku qabteen Nin watay Gaari Nooha ah oo doonayay inuu soo gaaro Goobta Qaraxa, si uu mar kale u xasuuqo Dhaawacyadda iyo Dadka Gurmadka samaynaya.
Ismiidaamiyahan ayeey Ciidanku istaajiyeen, intii ay Su’aalaha waydiinayeen ayeeyna Askartu ku arkeen Gaariga Fiilooyin si qaldan u dhex daadsan Gaariga, iyo walxo kale oo ay ka shakiyeen, kadibna waxay billaabeen inay ka fogaadaan goobta, una diidaan Shacabkana inay ka soo ag dhawaadaan, kadibna waxay dalbeen Kooxda Miina Baarayaasha, Hase yeeshee intii aysan Kooxdu soo gaarin Goobta ayuu Gaarigii qarxay, Waxaana gacanta lagu hayaa Ninkii waday Gaariga.
HornAfrik waxay dabagal ku samaysay Ninkan la qabtay iyo Macluumaadkiisa, waxaana Ugu horayn aan helnay Sawirka Ismiidaamiyahaas oo ku jira Gacanta NISA, Waxaana uu ka soo jeedaa Gobaladda Bay iyo Bakool, isagoona si hor dhac ah Baarayaasha ugu sheegay inuusan kala aqoon Muqdisho oo lagu hagayay Taleefoon, isla markaana uu ka yimid Baydhabo.
Ismiidaamiyahan la qabtay waxa uu ka hadlayaa Afka Mayga ee looga hadlo Goboladda Bay iyo Bakool, isagoona sheegtay in hadda ay ugu horayso Magaaladda Muqdisho.
Ismiidaamiye la qabtay